मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2019-01 > भगवानको बारेमा चार आधार
मेरी श्रीमती इराले मलाई बताउँछिन् कि ईश्वरको बारेमा कुरा गर्दा आफ्नो पेशागत र गाह्रो अवस्थामा व्यक्त गर्न धेरै सजिलो छ। मेरो पहिलेको चर्चको सेवामा जब मेरो दिमाग अक्सफोर्डमा चार वर्ष र क्याम्ब्रिजमा दुई वर्षसम्म मैले भाग लिनुपर्ने ईश्वरशास्त्रीय व्याख्यानहरू भरिएको थियो, तब इराले भनिन् कि जब मनेको कुरा गर्दछु म कहिलेकाँहि अलिकति पनि अचम्मै कुरा गर्छु। प्रचार गरियो।
मैले आफ्नो विश्वासको आधारभूत ज्ञान बुझ्नलाई सजिलो बनाउनको लागि उनले उनको कामलाई बनाउँछिन्, र उनी अझै पनि गर्छिन्।
पक्कै पनि उनी ठीकै छिन्। विश्वास र जीवनको बारेमा सिकाउनुहुँदा येशूले सरल शब्दहरूमा बोल्नु आफ्नो व्यवसाय बनाउनुभयो। उसलाई थाहा थियो कि यदि उसले के भनिरहेछ उसले केहि पनि बुझेन भने, केही पनि भन्नु हुँदैन। यदि तपाईं स्पष्ट रूपमा बुझ्ने कुराको व्याख्या गर्नुहुन्छ भने, यसको अर्थ सतही हुनु हुँदैन। हामी केही आधारभूत बुँदाहरूको बारेमा कुरा गरौं जुन हामी सबैलाई परमेश्वरबारे जान्नुपर्दछ।
भगवान चाखलाग्दो छ
यदि ईश्वरको बारेमा कुनै उपदेश हामीलाई कहिल्यै पट्टाइलाग्दो देखिन्छ भने, यो प्रचारकको कारणले हो कि उसले वा उसले सञ्चारको आधारभूत नियमहरू पालना गरेको छैन। हुनसक्छ हामी यसको लागि जिम्मेवार छौं किनकि हामीले पर्याप्त ध्यान दिएनौं। हामी पक्का हुन सक्छौं कि दोष परमेश्वरमा कहिल्यै हुँदैन। संसारका सबै रोचक चीजहरू ती सृष्टिकर्ताका फीकी रंगका चिन्ताहरू बाहेक अरू केही छैनन्। संसारमा ईश्वरको अध्ययन भन्दा बाहेक अरू कुनै रोचक अध्ययन छैन। बाइबलले हामीलाई अध्ययन गर्न भन्छ जब यसले हामीलाई सारा दिमागले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न आग्रह गर्दछ।
निस्सन्देह, सृष्टिले ईश्वरीय प्रतिबिम्ब कसरी झल्काउँछ भनेर हेरेर अध्ययन गर्न प्रायः सजिलो हुन्छ। सृष्टिको सूर्यका प्रतिबिम्बहरू हेर्नको लागि सूर्यको चम्किरहेको उज्यालोमा हेर्नु यो अधिक सजिलो तरिका हो।
यदि हामी इन्द्रेणीमा हेर्छौं, हामी विभिन्न रंगहरू रमाउँदछौं, तर यदि सूर्यको प्रकाशले उनीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन भने यी रंगहरू मध्ये कुनै पनि कुरा हाम्रो लागि कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसोभए संसारले चाखलाग्दो हुने थिएन यदि यसले परमेश्वरको आफ्नै स्वभावलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन।
भगवान अप टु डेट छ
जब हामी भगवानलाई सृष्टिकर्ताको रूपमा बोल्दछौं, यसको मतलब यो होइन कि विगतको कुनै समय परमेश्वरले बटन थिच्नुभयो र सबै थोक अस्तित्वमा आए। हामी यो पनि विश्वास गर्छौं कि हामी यहाँ छौं भन्ने तथ्य परमेश्वरको निरन्तर रचनात्मक गतिविधिमा निर्भर गर्दछ।
गत हप्ता मैले यो पत्ता लगाउन को लागी केहि मानिसहरु को लागी विज्ञानले धर्मलाई खण्डन गरेको छ। त्यो पक्कै पनि सही छैन। विज्ञान र धर्मले पूर्ण बिभिन्न प्रश्नहरू सोध्छन्। विज्ञानले सोध्यो: "चीजहरू यस संसारमा कसरी काम गर्छन्?" बदलामा धर्मशास्त्रले सोध्छ: "जीवन भनेको के हो र सबै कुराको अर्थ र उद्देश्य के हो?" विज्ञानको कानूनको सानो प्रिन्टलाई नबुझी हामी वास्तवमै राम्रोसँग जान सक्दछौं, तर यदि हामीले पृथ्वीमा हाम्रो जीवनको अर्थ र उद्देश्यको बारेमा कहिल्यै सोधेनौं भने हामी कसरी जीवनको सर्वोत्तम बनाउन र यसको लागि उत्तम प्रयोग गर्न सक्दछौं? हामी र संसार धेरै गरीब छ।
अरूले भगवानले पुरानो प्रार्थना किताबको भाषामा मात्र पूजा गर्न सक्दछ भनेर अनुमान लगाउन सक्छ। यस्तो देखिन्छ कि यदि तपाई राम्ररी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भने तपाई आफ्नो घरबाट टाढा नभएको चर्चमा प्रार्थना पुस्तक सेवाहरू पाउनुहुनेछ। म व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरलाई यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। यद्यपि, आज सेवाहरूको बहुमतले एकदम फरक भाषा प्रयोग गर्दछ। आधुनिक गानहरूसहितको पारिवारिक सेवाहरू, गितार समूहहरूद्वारा प्रदर्शन गरिएको र एलसीडी प्रोजेक्टरहरू द्वारा समर्थित बढ्दो लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ।
अरूले सोच्दछन् कि इसाईमतको मिति सकिएको छ किनभने तिनीहरूले इसाईहरूलाई भेटेका छन् जसको जीवनको दृष्टिकोण तिनीहरूको आफ्नै भन्दा मेल खाँदैन। ठिक छ! हामी सबैलाई एक अर्काको प्रतिकृति हुन कति लामो समयदेखि आवश्यक छ वा स्वस्थ छ?
परमेश्वर सबै कुरामा संलग्न हुनुहुन्छ
जीवनलाई दुईमा विभाजन गर्न यो सामान्य प्रयोग गरियो। हामी "पवित्र" र "धर्मनिरपेक्ष" बीच भिन्नता राख्छौं। यो खराब विभाग थियो। यसले स indicated्केत गर्दछ कि जीवनका केही अंशहरू परमेश्वरमा महत्व राख्दछन्, चर्च जान्छन्, प्रार्थना भन्छन् र बाइबल पढ्छन्, तर अन्य कुराहरु परमेश्वरको काम होइन, जस्तै काममा जाँदा, डार्ट्स हाल्छन् वा हिंड्न जान्छन्।
यदि हामी विभाजनमा जोड दिन्छौं भने पनि परमेश्वर पूर्ण रूपमा सांसारिक, चासो राख्नुहुन्छ र पूर्ण रूपमा सबै कुरामा संलग्न हुनुहुन्छ, धार्मिक तत्त्वलाई बाहेक अरू केही पनि छैन। यो किनभने तपाईं र म, हामी जे गर्छौं, जे पनि गर्छौं, भगवान समावेश छ।
भगवानले सबै जीवनको सृष्टि गर्नुभयो र हरेक जीवन उहाँको लागि महत्त्वपूर्ण छ। येशू भन्नुहुन्छ: हेर, म ढोकामा उभिन्छु र ढकढक्याउँछु। जसले मेरो आवाज सुन्छ र मसँग कुरा गर्छ, म भित्र जान्छु। अवश्य पनि ऊ चर्चको ढोकामा छ, तर पब, कारखाना, पसल र अपार्टमेन्टको ढोकामा पनि। जब तपाईं यो पाठ पढ्नुहुन्छ, भगवान तपाईं ढोकामा ढक्ढकाउनुहुन्छ।
भगवान अतुलनीय छ
धेरै वर्ष अघि मैले एक जना मानिसलाई भेटें जसले दाबी गरे कि उनले पवित्र त्रिएकको शिक्षा उसको टाउकोमा राम्ररी प्याक गरिएको छ। केही समय पछि उनी विश्वविद्यालयमा असफल भए र उनले कुनै योग्यता बिना शिक्षा पूरा गर्नुप .्यो। एक तरिकामा, उहाँ यसको योग्य हुनुहुन्थ्यो। उसले वास्तवमै सोचेजस्तो देखिन्थ्यो कि उसको आफ्नै मानसिक कलाहरू परमेश्वरको रहस्यहरू पत्ता लगाउन पर्याप्त हुन्छ, तर निस्सन्देह, ईश्वर यसको लागि कत्ति ठूलो छ।
हुनसक्छ हामी सबैले यसबाट पाठ सिक्न सक्छौं। हामी भगवानलाई हामीले बुझ्न सक्ने आकारमा कम गर्न चाहन्छौं। ईश्वरशास्त्रीहरूको लागि प्रलोभन भनेको विश्वासलाई सुत्रको आकारमा घटाउन चाहन्छ। धर्मगुरुले भगवानलाई संस्थाको आकारमा घटाउन लोभ्याउँछ। कतिपय इसाईहरू यस वा त्यो धार्मिक अनुभवको आकारलाई घटाउन प्रलोभनमा पर्दछन्। तर त्यो कुनै पनि पर्याप्त छैन। भगवान एकदम ठूलो, एकदम फराकिलो, अत्यन्त असीमित हुनुहुन्छ र हामीले सोच्न सक्ने हरेक सूत्र, प्रत्येक संस्था, हरेक अनुभवका सबै बन्धनहरू तोड्नुहुनेछ।
यी सबै इसाई जीवनको भाग र ईश्वरको समग्र बुझ्न नसक्ने कुरा हो। जतिसुकै हामी परमेश्वरबाट कत्ति धेरै सिक्छौं, उहाँलाई कत्तिको राम्ररी चिन्छौं र हामी उहाँलाई कति माया गर्छौं र उहाँको उपासना गर्छौं, त्यो जान्न, प्रेम गर्न र उहाँलाई उपासना गर्न सधैं असीमित हुनेछौं। हामीले यो उत्सव मनाउन र आनन्द लिनुपर्दछ; र मैले व्यक्तिगत रूपमा कस्तो अचम्मको पाएँ त्यो अनन्त शक्ति र महिमाका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको प्रकृति हामी कहिले पनि पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनौं, एक्लै एक्लो छोड्नुहोस्, तपाईं र म अहिले जीवनमा धेरै सम्भावनाहरूको एक विशाल कुरा पत्ता लगाउनको लागि कुर्दै छु।
भगवान चाखलाग्दो छ र उहाँ हामीलाई रमाईलो पनि पाउनुहुन्छ। भगवान अप टु डेट हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईंको आज र तपाईंको भोलि सम्झौता गर्नुहुन्छ - मलाई पनि। परमेश्वर सामेल हुनुहुन्छ र हामी र सहभागिताको लागि हामीमा स्वीकार्य हुन चाहानुहुन्छ। भगवान अतुलनीय छ र व्यक्तिगत साथीको रूपमा सधैं हाम्रो पक्षमा हुन्छन्। तपाईं बाँचिरहँदा र बढ्दै जानुहुँदा भगवानले तपाईंलाई आशिष्‌ दिइरहनुभयो र दिन-दिन हाम्रो लागि मतलब हुन सक्ने सबै कुराको मजा लिनुभयो।
रोय लरेन्स द्वारा